ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၆) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
၁၁–ရာစု မတိုင်မီက အာရ်ကာန်(ရခိုင်)သမိုင်းအကျဉ်း
အစောပိုင်း ဟိန္ဒူလူမျိုး (သို့မဟုတ်) ဓညဝတီမင်းဆက်
ရခိုင်ပြည်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နှင့် ဆက်စပ် နေသောကြောင့် ၄င်း၏ ခေတ်ဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြို့ပြ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးများကို ခရစ်မပေါ်မီ ရာစုနှစ်များ မတိုင်မီကပင် ရရှိခဲ့ပြီး၊ ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာနှင့် မြို့ပြ အုပ်ချုပ်မှုစနစ်များ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ (RC. မာဂျုမ်ဒါးရ်) ……………………..
ဆက်လက်ပြီး ပိုမို လေ့လာလိုပါက
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ နယ်နမိတ် အတွင်းကျသည့်
နယ်ပယ်ပိုင်နက်သို့ အစုလိုက် အပြုံလိုက်
ရောက်ရှိ လာသော ပိုးမွှားအကောင်ပလောင်များ
Enclave ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၄င်းဒေသသည် နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်၏ နယ်နမိတ် တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ် တည်ရှိနေသော မိခင် နိုင်ငံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ဖက် အစိုးရ အဆက်ဆက်နှင့် တစ်ပူးတွဲတွဲ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် လာသော ရခိုင် အစွန်းရောက် အမျိုးသားဝါဒီတို့သည် အာ(ရ်)ကာ(န်) (ခေါ်) ရခိုင်ဒေသရှိ ရိုဟင်ဂျာ နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်း အမျိုးမျိုး၊ စီမံကိန်း အသွယ်သွယ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူတို့သည် မြန်မာပြည် တွင်း၌ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြားသားများ ဝင်ရောက် နေထိုင်သော နယ်ပယ် ပိုင်နက် တစ်ခုရှိသည်ဟု အမြဲကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ အကျော်ကြားဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဒေါက်တာအေးချမ်း ဆိုသူဟု သိရသည်။ ရခိုင်ပြည်၊ ဘူးသီးတောင် နယ်ဖွား ဒေါက်တာအေးချမ်း ဆိုသူသည် ရခိုင်ပြည်၌ ၄င်းကဲ့သို့ Enclave ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ၁ ထိုသို့တင်ပြလာခြင်း ကြောင့် တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာများ နှင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့ကြား ရှိနေခဲ့သော ပဋိပက္ခများကို ပြန်ပြောင်း ရောင်ပြန် ဟပ်စေခဲ့သည်။ ၄င်းသည် သာမန် Enclave ဟု မဆိုနိုင်ပေ။ သည် Enclave အား ရခိုင်ပြည်၊ မေယု နယ်ခြား ဒေသတွင် နေထိုင်သော တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာများ နှင့် ပတ်သက်၍ အထူးပုံဖေါ် ရေးသား ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အေးချမ်းသည် ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုး တို့အား မြန်မာနိုင်ငံ(Burma)၏ မူရင်း ဒေသခံလူမျိုး မဟုတ်ဟု ဆိုသည့် အပြင် ရိုဟင်ဂျာ တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင် မြောက်ပိုင်း ဒေသတွင် တရားမဝင် နေထိုင် လာခဲ့သော သူများဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲ ပြောဆိုသည်။ ………………………
ပိုမို သိလို၊ ဖတ်ရှု လိုပါက
ဤနေရာတွင် ကလိပ် နှိပ်ပါ
ရခိုင်ပြည်နယ် သမိုင်းကို အနီးကပ် လေ့လာသူ တစ်ဦးအနေဖြင့် စာအုပ်စာပေများ ရှာဖွေ စုဆောင်း ဖတ်ရှုလေ့ရှိရာ ဇော်မင်းထွဋ်ဆိုသူက ၂၀ဝ၁ ခုနှစ်မှာ ဂျပန်ပြည်တွင် ထုတ်ဝေသော “ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် နှင့် တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာများ” ဟုဆိုသော စာအုပ်ကိုလည်း လေ့လာ ဖတ်ရှု့ခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကို အထပ်ထပ်အခါခါ ဖတ်ရှု့ရာ ဆက်စပ်မှု မှန်ကန်ပြီး ကိုးကားချက် ပြည့်စုံကြောင်း နှင့် အထောက်အထား ခိုင်လုံကြောင်း တွေ့ ရှိရပါသည်။……………………….
အပြည့်အစုံကို ပိုမိုလေ့လာ ဖတ်ရှု လိုပါက
06/01၁၄၃။ – Towards Understanding Arakan History ( Part II)
06/01၁၄၂ – Towards Understanding Arakan History (Part I)
06/01၁၄၁။ – The Crescent in Arakan ( Moshe Yegar )
06/01၁၃၉။ – ရခိုင်ပြည်မှ ကျောက်စာမှတ်တမ်း ၂ – ခု
06/01၁၃၈။ – ရခိုင်ပြည် သို့မွတ်ဆလင်များရောက်ရှိလာခြင်း
11/11၁၃။ – ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း (ဦးနုရ်ကမာလ်)
10/11၃။ – Islam in Burma
← ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါတယ်။ အပိုင်း(၅)
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသလား ? ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတကယ်ရှိပါသည်။ အပိုင်း(၇) →